Wikipedia:Community Portal/မော်ကွန်း ၄ - ဝီကီပီးဒီးယား
Wikipedia:Community Portal/မော်ကွန်း ၄
၁ Review of initial updates on Wikimedia movement strategy process
၂ Overview #2 of updates on Wikimedia movement strategy process
၃ We invite you to join the movement strategy conversation (now through April 15)
၄ Start of the 2017 Wikimedia Foundation Board of Trustees elections
၅ Read-only mode for 20 to 30 minutes on 19 April and3May
၆ Wikidata description editing in the Wikipedia Android app
၇ New Page previews feature
၈ New Wikipedia Library Accounts Available Now (May 2017)
၉ Voting has begun in 2017 Wikimedia Foundation Board of Trustees elections
၁၀ Beta Feature Two Column Edit Conflict View
၁၁ Prototype for editing Wikidata infoboxes on Wikipedia
၁၃ Join the next cycle of Wikimedia movement strategy discussions (underway until June 12)
၁၄ Machine translation support enabled today for Content Translation
၁၄.၁ Content Translation အတွက် စက်ဖြင့် အလိုအလျောက် ဘာသာပြန်စနစ် ယနေ့ ထောက်ပံ့မှုပေးခြင်း
၁၅ Start of the 2017 Wikimedia Foundation Funds Dissemination Committee elections
၁၆ Accessible editing buttons
၁၇ Page Previews (Hovercards) update
၁၈ RfC regarding "Interlinking of accounts involved with paid editing to decrease impersonation"
၁၉ Discussion on synced reading lists
၁၉.၂ Why not watchlists
၂၀ New print to pdf feature for mobile web readers
၂၁ Call for Wikimania 2018 Scholarships
၂၂ User group for Military Historians
Review of initial updates on Wikimedia movement strategy process[ပြင်ဆင်ရန်]
Posted by MediaWiki message delivery on behalf of the Wikimedia Foundation, ၂၀:၃၁၊ ၁၅ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၇ (UTC) • Please help translate to your language • Get help
Overview #2 of updates on Wikimedia movement strategy process[ပြင်ဆင်ရန်]
Posted by MediaWiki message delivery on behalf of the Wikimedia Foundation, ၁၉:၄၄၊ ၉ မတ် ၂၀၁၇ (UTC) • Please help translate to your language • Get help
We invite you to join the movement strategy conversation (now through April 15)[ပြင်ဆင်ရန်]
၀၅:၀၉၊ ၁၈ မတ် ၂၀၁၇ (UTC)
Start of the 2017 Wikimedia Foundation Board of Trustees elections[ပြင်ဆင်ရန်]
Posted by MediaWiki message delivery on behalf of the Wikimedia Foundation Elections Committee, ၀၃:၃၇၊ ၇ ဧပြီ ၂၀၁၇ (UTC) • Please help translate to your language • Get help
Read-only mode for 20 to 30 minutes on 19 April and3May[ပြင်ဆင်ရန်]
MediaWiki message delivery (ဆွေးနွေး) ၁၇:၃၃၊ ၁၁ ဧပြီ ၂၀၁၇ (UTC)
Wikidata description editing in the Wikipedia Android app[ပြင်ဆင်ရန်]
-DBrant (WMF) ၀၈:၄၁၊ ၁၄ ဧပြီ ၂၀၁၇ (UTC)
New Page previews feature[ပြင်ဆင်ရန်]
Thank you, MediaWiki message delivery (ဆွေးနွေး) ၁၆:၅၂၊ ၁၉ ဧပြီ ၂၀၁၇ (UTC)
New Wikipedia Library Accounts Available Now (May 2017)[ပြင်ဆင်ရန်]
--The Wikipedia Library Team ၁၈:၅၂၊ ၂ မေ ၂၀၁၇ (UTC)
Voting has begun in 2017 Wikimedia Foundation Board of Trustees elections[ပြင်ဆင်ရန်]
၁၉:၁၄၊ ၃ မေ ၂၀၁၇ (UTC)
Beta Feature Two Column Edit Conflict View[ပြင်ဆင်ရန်]
Birgit Müller (WMDE) ၁၄:၄၁၊ ၈ မေ ၂၀၁၇ (UTC)
Prototype for editing Wikidata infoboxes on Wikipedia[ပြင်ဆင်ရန်]
Birgit Müller (WMDE) ၁၄:၄၄၊ ၁၆ မေ ၂၀၁၇ (UTC)
Join the next cycle of Wikimedia movement strategy discussions (underway until June 12)[ပြင်ဆင်ရန်]
၂၁:၀၉၊ ၁၆ မေ ၂၀၁၇ (UTC)
Machine translation support enabled today for Content Translation[ပြင်ဆင်ရန်]
Hello, machine translation support for Content Translation (beta feature) has now been extended and enabled for users of Burmese Wikipedia using Yandex. It can be used when translating Wikipedia articles into Burmese with Content Translation. To start using this service, please choose ‘’Yandex.Translate’’ from the ‘’Automatic Translation’’ dropdown menu that you see on the sidebar after you start translating an article. Please note, machine translation is available from all the languages that are supported by Yandex.Translate, but Content Translation can still be used in the usual manner for translating from all languages, with or without machine translation support.
We have tested the service for use on the Burmese Wikipedia, but there could be unknown problems that we are not aware of yet. Please do let us know on our Project Talk page or phabricator if you face any problems using Content Translation. This message is only in English and we will be very grateful if it could be translated into Burmese for other users of this Wikipedia. Thank you. On behalf of WMF Language team: --Runa Bhattacharjee (WMF) (ဆွေးနွေး) ၀၅:၁၉၊ ၁၇ မေ ၂၀၁၇ (UTC)
Content Translation အတွက် စက်ဖြင့် အလိုအလျောက် ဘာသာပြန်စနစ် ယနေ့ ထောက်ပံ့မှုပေးခြင်း[ပြင်ဆင်ရန်]
ဟဲလို၊ Content Translation (စမ်းသပ်) အတွက် Yandex ကို အသုံးပြုပြီး စက်ဖြင့် အလိုအလျောက် ဘာသာပြန်စနစ်ကို မြန်မာဝီကီပီးဒီးယား အသုံးပြုသူများအတွက် ထောက်ပံ့မှုပေးလိုက်ပါပြီ။ ဝီကီပီးဒီးယား ဆောင်းပါးများကို Content Translation အသုံးပြုပြီး မြန်မာဘာသာသို့ ဘာသာပြန်ဆိုနေစဉ် အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဝန်ဆောင်မှုကို စတင်အသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကို စတင်ဘာသာပြန်ဆိုနေချိန်တွင် sidebar တွင် ‘’Automatic Translation’’ မှ ‘’Yandex.Translate’’ ကို ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ Yandex.Translate မှ ထောက်ပံ့မှုပေးသော ဘာသာစကားများအတွက် စက်ဖြင့် ဘာသာပြန်ခြင်းကို ရရှိနိုင်သော်လည်း ဘာသာစကားအားလုံးမှ တဆင့် ပုံမှန်အတိုင်း ဘာသာပြန်ဆိုရန်အတွက်မူ Content Translation ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ဝီကီပီးဒီးယား မူပိုင်ခွင့် မူဝါဒများ၊ အသုံးပြုသူများ၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာများနှင့် အမှတ်တံဆိပ်ကိုယ်စားပြုအချက်အလက်များ ပေါက်ကြားခြင်းမရှိစေဘဲ Yandex.Translate ကို အသုံးပြုခွင့် ရရှိစေရန် ဝီကီမီဒီယာ ဖောင်ဒေးရှင်း ဥပဒေအဖွဲ့နှင့် Yandex တို့အကြား သဘောတူညီချက်တစ်ရပ် ကို ပူးတွဲချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလမှ စတင်ပြီး Yandex စက်ဘာသာပြန်စနစ်ကို ဝီကီပီးဒီးယား ဆောင်းပါးများကို ဘာသာစကားများစွာမှ ဘာသာပြန်ဆိုရာတွင် အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ ဥပဒေရေးရာစာချုပ် အကျဉ်းချုပ် အပါအဝင် နောက်ထပ် အချက်အလက်များအတွက် Content Translation ရှိ စက်ဘာသာပြန် ဝန်ဆောင်မှုစနစ်အကြောင်းနှင့် Yandex ဘာသာပြန် ဝန်ဆောင်မှု အကြောင်းတို့မှာ ဝင်ရောက် ဖတ်ရှုပေးပါရန် ပန်ကြားပါတယ်။ Content Translation နဲ့ ဘာသာပြန်ဆိုချက်တွေကို စက်ဘာသာပြန်စနစ် ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေဖို့ အသုံးပြုကြောင်း သိစေလိုပါတယ်။
မြန်မာဘာသာ ဝီကီပီးဒီးယားမှာ အသုံးပြုနိုင်ဖို့ ဝန်ဆောင်မှုကို ကျွန်တော်တို့ စမ်းသပ်ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ သတိမမူလိုက်နိုင်တဲ့ ပြဿနာများ ရှိနေနိုင်ပါတယ်။ Content Translation အသုံးပြုနေချိန်မှာ ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာ ကြုံတွေ့ရပါက ကျေးဇူးပြု၍ ပရောဂျက် ဆွေးနွေးချက် စာမျက်နှာ သို့မဟုတ် phabricator မှတဆင့် ကျွန်တော်တို့ဆီကို ပြောကြားစေလိုပါတယ်။ ဤစာကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်သာ ရေးသားထားပြီး ဤဝီကီပီးဒီးယားပေါ်ရှိ အခြားသော အသုံးပြုသူများအတွက် မြန်မာဘာသာသို့ ပြန်ဆိုပေးနိုင်ပါက အထူးကျေးဇူးတင်မိမှာပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ WMF ဘာသာစကားအဖွဲ့ ကိုယ်စား --Runa Bhattacharjee (WMF) (ဆွေးနွေး) ၀၅:၁၉၊ ၁၇ မေ ၂၀၁၇ (UTC)
Start of the 2017 Wikimedia Foundation Funds Dissemination Committee elections[ပြင်ဆင်ရန်]
၂၁:၀၆၊ ၂၃ မေ ၂၀၁၇ (UTC)
Accessible editing buttons[ပြင်ဆင်ရန်]
Whatamidoing (WMF) (talk) ၂၂:၂၂၊ ၁၀ ဇူလိုင် ၂၀၁၇ (UTC)
Page Previews (Hovercards) update[ပြင်ဆင်ရန်]
CKoerner (WMF) (talk) ၂၂:၃၂၊ ၂၀ ဇူလိုင် ၂၀၁၇ (UTC)
RfC regarding "Interlinking of accounts involved with paid editing to decrease impersonation"[ပြင်ဆင်ရန်]
MediaWiki message delivery (ဆွေးနွေး) ၂၁:၀၆၊ ၁၇ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၇ (UTC)
Discussion on synced reading lists[ပြင်ဆင်ရန်]
Why not watchlists[ပြင်ဆင်ရန်]
CKoerner (WMF) (talk) ၂၀:၃၅၊ ၂၀ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၇ (UTC)
New print to pdf feature for mobile web readers[ပြင်ဆင်ရန်]
CKoerner (WMF) (talk) ၂၂:၀၇၊ ၂၀ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၇ (UTC)
Call for Wikimania 2018 Scholarships[ပြင်ဆင်ရန်]
Best regards, David Richfield and Martin Rulsch for the Scholarship Committee ၁၉:၂၄၊ ၂၀ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၇ (UTC)
User group for Military Historians[ပြင်ဆင်ရန်]
MediaWiki message delivery (ဆွေးနွေး) ၁၀:၄၆၊ ၂၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၇ (UTC)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Community_Portal/မော်ကွန်း_၄&oldid=420099" မှ ရယူရန်